समाचार — falanonews.com
Posted by Apil Tripathi | समाचार
कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका घाटहरुमा निर्वाध अबैध उत्खनन भइरहेको पाइएको छ । ठेक्का सम्झौता नै नभई गाउँपालिकाका घाचोक र दवाडी घाट बाट दिनदहाडै उत्खनन भैरहेको छ । अन्नपुर्ण संरक्षण क्षेत्र भित्र पर्ने घाटहरुमा गाउँपालिकाले उत्खनन र...बाँकी
ब्यास नगरपालिका वडा नं. ६ स्थीत शिशाघाट प्रहरी चौकी विवादमा तानिएको छ । त्यहाका इन्चार्ज शुबोध कुमार रायलाई एक स्थानिय व्यवसायीसंग नियमित रुपमा घुस लिने गरेको आरोप लागेको छ । व्यवसायी पाण्डव लामाले इन्चार्ज रायले...बाँकी
पोखराको राष्ट्रिय माबिका शिक्षकले छात्रालाई होटलमा लगेर परीक्षा लिएको प्रकरण सेलाउन नपाउदै त्यस्तै घटनाको झल्को दिने गरी पोखरा छोरेपाटनको नयाँ प्रकरण बाहिरिएको छ । विद्यालयका एक शिक्षक उपेन्द्रराज पोखरेलले अवैध ढंगबाट परीक्षा लिएको खुलेको हो...बाँकी
पुर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले केही समय अघि केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा मिलेर बुढी गण्डकी जल बिद्युत आयोजनाबाट ९ अर्ब खाएको सार्वजनिक रुपमा बताएका थिए । देशका पुर्व प्रधानमन्त्रीले नाम र रकम नै...बाँकी
पोखरा टुडिखेलमा रहेको राष्ट्रिय माबिका शिक्षकले एक छात्रालाई होटलमा पु¥याएर परीक्षा लिएको खुलेको छ । विद्यालयका शिरीष कुमार वस्ताकोटी नाम गरेका स्थायी शिक्षकले कक्षा ११ को परीक्षा दिन छात्रालाई होटल पु¥याएका थिए । छात्राका अनुसार...बाँकी
प्रतिबन्धीत नेकपाका महासचिब नेत्रबिक्रम चन्दका पुत्र डा. प्रकाश चन्दलाई भारतिय नंवर बाट धम्की आएको छ । परीचय नखुलेका ब्यक्तिले दुर्गा प्रसाईको नाम लिदै डा. प्रकाशलाई धम्काउन खोजेको कल रेकर्डमा देखिन्छ । फोनमा दुर्गा लाई दुःख...बाँकी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शिफारीसमा भएको संसद बिघटनको बिषयलाई लिएर कास्कीका नेताहरु कडा सुनिएका छन । गण्डकी टेलिभिजनको कार्यक्रम गण्डकी छड्केको लागीे ३ जना नेतालाई एक ठाँउमा उभ्याइएको थियो । बहसमा नेकपा (ओली पक्ष) का...बाँकी
पोखरा महानगरपालिकाले सवारी साधनको पार्किङ शुल्क लिने गरी गरेको ठेक्का सम्झौताको बिरोध भएको छ । कारोनाले थला परेको यातायात क्षेत्रलाई सहयोग गर्नुको साटो महानगरले उल्टो दमन गरेको यातायात ब्यबसायीहरुको भनाई छ । पार्किङ शुल्क अत्यन्त...बाँकी
नेपाल बिद्युत प्राधिकरण, तनहुँ बितरण केन्द्र अन्र्तगतको आँबु प्रशाखाका कार्यालय प्रमुख कृष्ण आले घुस रकम सहीत रंगेहात पक्राउ परेका छन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, पोखरा कार्यालयको टोलीले मंगलबार उनलाई पक्राउ गरेको हो । आबुखैरेनीमा...बाँकी
दिपक मनाङे श्रीमती पक्राउ प्रकरण, मनाङे भन्छन– ‘गल्ती गर्ने कसैलाई छाड्दीन’, प्रहरी भन्छ–‘चोरी भएकै देखियो’ (भिडियो सहित)
दिपक मनाङे नामले परिचीत गण्डकी प्रदेश सभाका सांसद राजिव गुरुङकी श्रीमती दिक्छेन डोल्मा लामा चोरी अभियोगमा पक्राउ परिन । श्रीमती पक्राउ सम्बन्धमा सांसद मनाङे टेलिभिजन अन्तरवार्तामा देखिएका छन । आफुहरु केही महिना देखी अलग–अलग बस्ने...बाँकी